ဝန်ဆောင်မှု - Moe Tun Wai Moe Tun Wai
ဘယ်သူတွေ Website လွှင့်တင်ထားကြလဲ
မိမိ သိရှိထားသော အကြောင်းအရာ၊ နည်းပညာများ ကို Public သို့ချပြလိုသူများ။ စာပေ ဂီတ ကဗျာ အနုပညာရှင်များ၊ အဆိုတော် သရုပ်ဆောင် အစရှိသော အနုပညာရှင် များ၊ မိမိလုပ်ငန်းကို ပြည်တွင်း သာမက ပြည်ပ အထိ ထိုးဖောက်လိုသူများ။ မိမိ ထုတ်လုပ်သည့် ထုတ်ကုန်၊ ၀န်ဆောင်မှု အကြောင်း ပြည်တွင်း ပြည်ပ သို့ ပြန့်နှံစေလိုသူများ
ဘာကြောင့် Website လွှင့်တင်သင့်တာလဲ
မကြာတော့မည့် ကာလတွင် လုပ်ငန်းအများစုသည် Online မှ တဆင့် လည်ပတ်မှုများရှိလာမည်၊ ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားမှုများ ရှိလာမည်၊ Online အခြေပြု လုပ်ငန်းများ ထွက်ပေါ်လာမည် ဖြစ်သောကြောင့် မိမိ အတွက် နေရာတစ်နေရာ ကြိုတင်ဦးထားမှ စိတ်ချရပါမည်။ ထို့ပြင် Facebook, Ning, Twitter အစရှိသော Social Website များတွင် ဖန်တီးခြင်း မဟုတ်ပဲ Private ဖြစ်သောကြောင့် ပိုမိုမြင့်မားသော အဆင့်အတန်းတစ်ခု ရရှိမည်။ မိမိစိတ်ကြိုက် လွတ်လပ်စွာ ရေးသားနိုင်မည်။ မိမိစိတ်ကြိုက် ဒီဇိုင်းများ အပြင်အဆင် အသားနားများ ဖန်တီးနိုင်မည်။ မိမိ လိပ်စာကဒ်တွင် မိမိ website လိပ်စာပါ ထည့်သွင်းဖော်ပြနိုင်မည်။
Website ဖန်တီး လွှင့်တင်ဖို့ ဘယ်လောက်ကုန်ကျမှာလဲ
ဘလော့ရေးသားနေသူများ၊ free hosting များတွင် ရေးသားနေသူများ အတွက် Domain Registration Plan များ ၊ ကိုယ်ပိုင် Hosting ပြုလုပ်လိုသူများအတွက် Shared Hosting Plan များ ၊ Virtual Private Servers များ၊ Online commerce site ဖန်တီးလိုသူများအတွက် Additional IP Address, Cpanel License, SSL Certificate များ အစရှိသော ၀န်ဆာင်မှု အမျိုးမျိုးအတွက် နှစ်စဉ်ကြေး ၃သောင်းမှ ၃သိန်းအထိ ကုန်ကျနိုင်ပါသည်။
Website လွှင့်ဖို့ ဘယ်ကိုဆက်သွယ်ရမှာလဲ
Ko Moe Tun Wai ( Training Manager )
(UPPER FLOOR OF IT CYBER CAFE)
No.93, Between 49 Street & 50 St, Bogyoke Road, Yae Kyaw, Pazundaung Township, Yangon, Myanmar.email: moetunwai@moetunwai.com
PH: 01 295679
WEB HOSTING SERVICE FOR ALL!!
မိမိ အမည်၊ လုပ်ငန်း အမည်၊ အဖွဲ့အစည်း အမည် တို့ ဖြင့် website တစ်ခု တည်ဆောက်လိုသူတိုင်းအတွက် plan ဖြစ်ပါသည်။
- မိမိနာမည်ဖြင့် register လုပ်မည်ဆိုပါက ( www.မိမိနာမည်.com ) အမည်ဖြင့် domain တစ်ခု ရရှိပိုင်ဆိုင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
- Unlimited Storage ဖြစ်ပါသည်။
- Professional Design အမျိုး (၂၀) ခန့်အတွင်းမှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
- Domain Base e-mail account (၁၀) ခုရရှိပါမည်။
- မိမိကိုယ်တိုင် ၀င်ရောက်ပြင်ဆင် နိုင်မည့် Super Admin Account ကိုရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
AMAZING MONTHLY FEE!!
တစ်လလျှင် 3$ ( ၃၀၀၀ ကျပ် ) အများဆုံး ကျသင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။
GET STARTED BEFORE IT'S TOO LATE!!!
Domain Hosting Service ကို ၀ယ်ယူတော့မည့် လူကြီးမင်များ အနေဖြင့် မိမိ အမည်ဖြင့် အခြားသူများ ဦးစွာ Register မလုပ်မှီ ၀ယ်ယူထားမှ စိတ်ချရမည် ဖြစ်ပါသည်။
CONNECT NOW & PUBLISH TOMORROW!!
မိမိ လွှင့်တင်လိုသည့် အမည်၊ web အမျိုးအစား၊ ထည့်သွင်းလို သည့် အကြောင်းအရာများ၊ အချက်အလက် Data များကို moetunwai@moetunwai.com ကို ချက်ချင်း လိပ်မူ ပေးပို့လျှင် သင် အနာဂတ် online လောက သို့ ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းချခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်..။